DIGREETO-Taliyihii qaybta booliska gobolka Nugaal oo xilka laga qaaday. – Radio Daljir
DIGREETO-Taliyihii qaybta booliska gobolka Nugaal oo xilka laga qaaday.
Noofember 12, 2016 2:50 b 0
Garoowe, Nov 12 2016-Taliyaha guud ee ciidanka booliska dowladda Puntland Cabdulqaadir Shire Faarax Ereg ayaa xilkii ka qaaday taliyihii qaybta booliska gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir isagoona u magacaabau taliye cusub.
Sawirro-Warmurtiyeed laga soo saaray shirkii nabadaynta Galkacyo.
DHEGEYSO-Wafti uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka deegaanka oo gaarey Haylaan.
on Fadumo Dayib: “Shaqadaan looma oggola qof isirkiisa yahay Soomali” darteed baan shaqada UN uga tagay (dhegayso)Waa run aduunka dadka soomaalida waxaa dadka calamka siiba reer galbeedka ka iminsin yihiin dad...
on Baahin: Khamiis, Oct 20, Weriye Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Ciidanka dawlada federaalka oo la wareegay Dayniile, fariisinkii ugu dambeeyey ee Al-shabaab, kuna sii jeeda G. Shabeelada; R/wasaare Gaas oo hub kala wareegay Yusuf Indhacade oo ka mid ah siyaasiyiinta hubaysan ee Muqdisho; Shacabka reer Boocame, Sool oo ka cabanaya xaalufin lagu hayo dhul-daaqsinka xoolaha.BENTDAA
on UNDP: Fursado Shaqo & Jagooyin oo BannaanAsc magacayga waa daahir sheikh ahmed waxaan joogaa magaalada marko ee xarunta g.sh.hoose. waxaan heystaa...
on Hargeysa & Burco: Fursado Shaqo Save the Children – Sarkaal Daryeelka Carruurtai need ajop that is all!
on QUESTS-MIDA – Ma tahay Xirfadle Shaqo-raadis ah?magacaygu waa khadar Abdulahi jooga bosaso waxaana ahay xirfadleh pharmacy